Naamusaan nama waliin jiraatan
Baay'ina ummataafi dandeettii hojiirra oolmaa imaammatawwanii - Monday, 27 March 2017 17:35	Daldaltoonni seeraan ala gatii dabalaniifi meeshaalee bu'uuraa miliqsan adabamaa jiru - Monday, 27 March 2017 17:32	Biyya 'TB'rraa walaboomte uumuuf socho'amaa jira - Monday, 27 March 2017 17:31	Rakkoowwan gumaacha bu’aalee bosonaa gufachiisan - Monday, 27 March 2017 17:30	Misooma jallisii marsaa tokkoffaatiin omishni kuntaalli 84 sassaabame - Monday, 27 March 2017 17:28	Tuesday, 28 March 2017
Featured	10 Feb 2017	Aadaafi-Artii
Akkuma ummata addunyaa kamuu ummanni Oromoo ummata naamusa, duudhaafi safuu qabuudha. Aadaafi duudhaan ummata kanaa akka galaanaa waraabamee kan hindhumne ta'ullee barreeffama kanaan waa'ee naamusasaa gabaabsinee isin dubbisiifna.
Naamusni waan guddaadha. Naamusa gaariifi safuu qabaachuun jireenya hawaasummaa keessatti iddoo olaanaa nama gonfachiisa. Naamusa jechuun seera, aadaa, duudhaafi hawaasummaa ummata wajjin jiraatanii kabajuudha.
Namni naamusa gaarii qabu hinsobu, hinhatu, sobaan hinkakatu, waadaa gale hindiigu, hinhamatu, afaan tola, safuu qaba, seeraafi safuu hawaasaa kabaja, bakka gaariitti argama, dhugaadhaan jiraata, hamaa hinhojjetu, hangafootaafi maanguddoota ni kabaja, jecha hamaa ni lagata, machaa'ee of hinwallaalu.
Hawaasa waliin jiraannu keessatti naamusni waan murteessaadha. Hawaasni waliin jiraatu wantoota baay'ee waliin qaba. Hamaafi tolaa, gaariifi yaraa walfaana hirmaachuun wajjummaan hawaasummaa gaarii qabatee jiraata. Kanaaf ammoo naamusni gaariin daran barbaachisaadha.
Namni of danda'ee qofaasaa hawaasaan ala jiraatu hinjiru. Dhalli namaa uumamaan hawaasummaa fedha. Akkuma namni namaaf qoricha ta'e ollaanis ollaaf qoricha. “Ollaafi dugdaan lafaa ka'u” jedhama mitiiree. Namni dhuunfaan waan hawaasaaf gumaachu qaba. Akka dhuunfaasaatti waan gaariifi tolaa hawaasa fayyadu hojjechuu qaba. Waan hamaa hojjetee hawaasasa miidhuu hinqabu. Naamusa hawaasasaas eeguufi kabajuu qaba.
Hawaasnis waan nama dhuunfaaf gumaachu ni qaba. Lamaanuu walmalee hintolan. Eenyuyyuu duudhaa hawaasaa keessaa bahee jiraachuu hindanda'u. Hawaasni tokko hawaasummaasaa keessatti waan gamtaa kan ta'e, waantota danuu waliin qaba. Seera ittiin walto'atu, amantii waliin hordofu, akkaataa itti walgargaaruufi waliin jiraatu qaba. Akkasumas safuu waliif qaba. Kunniin hundi ammoo naamusa ofii qabu.
Hawaasni tokko guutuu ta'uuf hariiroo cimaafi gaarii qabaachuu qaba. Kun ammoo kan ta'u naamusni gaariin yoo hawaasa sana keessa jiraateedha. Hawaasni hawaasummaa gaarii hinqabne jiruu hinqabu.
Hawaasummaa gaariin hinjiru taanaan walsobuu, walganuu, walhamachuu, tokkummaa dhabuu, hammeenya walirratti yaaduufi walitti hinaafuutu jiraata. Hawaasni akkanaa ammoo kabaja hinqabu; rakkoo ofii furachuu hindanda'u; jaalalaafi gammachuu waliin hinqabaatu, waljibba, waanuma salphaadhaan dafee kufa.
Naamusni gaariin madda gammachuuti. Burqaa jaalala hawaasa bal'aati. Akkasumas furtuufi riqicha hawaasa tokkooti. Akeeka badhaadhinaafi gammachuu dhala namaati. Hawaasni naamusa gaarii waliif qabu dhugaa, jaalala, namummaafi kabaja akkasumas gaarummaa aadaa godhata. Rakkatu walgargaaruu qaba, dhukkubsatu walgaafachuufi walwal'aanuu qaba. Kan walitti mufate ykn wallole araaramuu qaba. Hawaasummaafi naamusa gaarii kan jedhamus isuma kana.
Maddi: Kitaaba WAAQEFFANNAA
Charinnat Hundeessaatiin	Print
Lakkooftuu dubbistootaa	Har'a/Today1354Kaleessa/Yesterday1293Torban kana/This_Week2980Torban darbe/This_Month40742Guyyaa mara/All_Days314406	The first Ethiopian Locally Developed Ethionux Operating System, that has been under trial since the last 8 years(2007-2015) in Ethiopian Press Agency, Ethiopian News Agency for the past 2 Years & Ethiopian Revenues And Customs Authority for the past 1 Years , has now become fully operational. This website is built up on the operating system of Ethionux.